समाचार – Naya Kura Daily
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रती
Satye Samachar : ॐॐहिन्दू धर्मशास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् ।त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिने मान्यता रहेको छ । विहीबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संकेत मान्नुहोस् तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ । यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ । जो व्यक्ति सपनामा मोती,गगा,हार,मुकुट देख्छ उसको घरमा सधैं लक्ष्मीको बास हुन्छ । जसले सपनामा कुमालेले घैँटो बनाएको देख
बैतडीमा बिहीबार मृ’ त अवस्थामा फेला परेकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको करणीपछि ज्यान लिएको पो ष्टमा र्टम रिपोर्टबाट पुष्टि भएको छ । जिल्ला अस्पताल बैतडीमा गरिएको पो’ष्टमा’र्टम रिपोर्टबाट दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की भट्टको करणीपछि घाँ’ टी थि’चे’ र ज्यान लिएको पुष्टि भएको हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआईजी उत्तम सुवेदीले भने, ‘पो ष्ट मा र्टमा कज अफ डेथ करणीपछि घाँ’ टी थि चे को देखायो ।’ उनले सामूहिक करणी हो वा होईन भन्ने बारेमा थप परीक्षण भईरहेको जानकारी दिए । ‘हामीले घटनास्थलमा प्राप्त भएका सबै तथ्य परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएका छौ,’ उनले भने, ‘प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट प्राप्त भए अनुसन्धानमा अझै सहज हुने देखिन्छ ।’ पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि प्रहरीले करणीपछि र भागरथीको घाँ टीमा नि’मो’ठे’को दाग तथा चो’ट हरु देखिएको जनाएको छ । बुधवार हराएकी भट्टको बिहिवार शव फेला परेको थियो
७ दि’न’भित्रमा त’पाइले सो’चेको का’म ब’न्नेछ, ॐ ले’खि से’य’र ग’रौं। सा’त दि’नभित्’रमा त’पाइले सो’चेको का’म ब’न्नेछ बि’ल्कु’लै बे’वास्ता न’गर्नुहो’ला, ॐ ले’खि से’यर ग’रौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको श’क्ति हुन्छ। त्यसैले दे’खेको 30 से’केण्ड भित्’रमा शे’यर गर्’नुहोस ।७ दि’न भि’त्रमा त’पाइले न’सोचेको का’म ब’न्नेछ बि’ल्कुलै बे’वस्ता न’गर्नुहो’ला !!!अन्य’था अनि’स्ट हुने’छ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै यो पेज माथी ला’इक गर्नु न’भुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः
परापुर्बकाल देखी अहिले सम्म शिव’लि’ङ्ग’ला’ई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं ग’लाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ःलिं’ग’को अर्थ संस्कृतमा चिन्ह प्रतीक हुन्छ । शिव’लिं’ग’को अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिं’ग’को अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्री’लिं गको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिं’ग’को अर्थ न’पु’सं’कको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।आखिर के हो त शिव लिं*ग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिं’ग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं ग हो भनिएको छ । शिव लिं*ग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिं*ग हो । शिव’लिं’ग’को अर्थ अनन्त
सामान्यतया सर्प देखेपछि मानिसहरु डराउँछन्।तर,हालै भारतमा एक अनौठो खालको सर्प देखिएपछि हेर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ।भारतको कर्नाट कस्थित होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प फेला परेको हो । जसको टाउँकोमा सुनौलो रंगको प्रकाश चम्किन्थ्यो । सर्पको शीʼरमा प्रकाश चम्किएपछि नाग देʼवता भन्दै सʼर्पको पूजाआजा गर्ने मानिसको भीड लागेको थियो ।समाचारका अनुसार होलमाकी गाउँका एक स्थानीयको कुकुर खेतमा गएर अचानक भुक्न थाल्यो। त्यो देखेर मानिसहरु त्यहाँ पुगे । त्यहाँ पुग्नेवित्तिकै मानिसहरुले कोब्रा जातको अनौठो सर्प देखे । तर, सर्प विशेषज्ञका अनुसार त्यहाँ कुनै चमत्कारी नभएको बताʼएका छन् ।
काठमाडौ – बसमा यात्रा गरेका एक युवक बसेको सिटमै मृत फेला परेका छन् । झापाको केर्खाबाट विराटनगरका लागि हिँडेका एक युवक गाडीभित्रै मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । झापाको कमल गाउँपालिकास्थित केर्खाका २५ वर्षीय राजकुमार थापा गाडीमै आइतबार मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई बिहान करिब साढे ९ बजे मृत अवस्थामा फेला पारिएको थियो । आइतबार बिहान केर्खाबाट मे १ ख ३३३३ नम्बरको जनसेवा यातायात प्रालिको बसमा चढेर आएका उनी विराटनगर बसपार्कमा गाडीभित्रै मृत अवस्था फेला परेका प्रहरीले जनाएको छ । गाडीका सबै यात्रु ओर्लिसकेपछि पछि पनि उनी बसमै बसिरहे । किन बसवाट ओर्लिएनन् भनेर नजिक गएर हेर्दा उनको निधन भइसकेको थियो । उनलाई मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको बसका कर्मचारी प्रशन्न प्रसाईंले बताए । प्रहरीले झापाको केर्खामा रहेका उनका आफन्तलाई उनकै मोबाइलमा रहेको फोन नम्बरका आधारमा सम्पर्क गर
भेरी नदीमा बस खस्यो, एकको मृत्यु
सुर्खेत– छिन्चु जाजरकोट सडक खण्ड अन्तर्गत सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका ९ गरालेस्थित भेरी नदीमा बस खस्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार बसका चालक सुमन नेपालीको मृत्यु भएको हो । २२ वर्षीय उनी दाङको बबई गाउँपालिका–३ निवासी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय सुर्खेतका प्रमुख उपेन्द्र आचार्यका अनुसार ना ५ ख ७७५० नम्बरको मिनी बस आज दिउँसो सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-९ मा दुर्घटना भएको हो । बस सडकबाट भेरी नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ । सल्यान कालीमाटीदेखि बोटेचौरतर्फ जाँदै गरेको सो बसमा जम्मा तीन जनामात्र रहेको बताइएको छ ।्दुर्घटनामा कालिमाटी गाउँपालिका–४ का ईश्वर सुनार घाइते भएका छन् । दुर्घटनास्थलबाट उनको उद्धार गरी उपचारका लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । अर्का एकजनाको अवस्था भने अज्ञात रहेको छ । उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको जनाएको छ ।
ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रको जङ्गलमा पाँच दिनदेखि लागेको डढेलो मन्दिर परिसरमा नै पुगेपछि आगो नियन्त्रण गर्न हेलिकप्टरको प्रयोग गरिएको छ । बिहीबारदेखि लागेको डढेलो सोमबार बिहान मन्दिर परिसरमा नै पुगेको थियो । स्थानीयवासीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले हरसम्भव प्रयास गर्दासमेत आगो नियन्त्रणमा नआएको र मन्दिर नै जोखिममा परेपछि सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर झिकाइएको थियो । हेलिकप्टरले जोरपोखरीबाट पानी लगेर मन्दिर परिसरको आगो निभाएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विषेश प्रविधिको बकेटमा पानी ल्याएर हेलिकप्टरले आकाशबाटै आगलागी क्षेत्रमा पानी खन्याएको थियो । उक्त हेलिकप्टरले पाँच पटक पानी खन्याएपछि आगलागीबाट मन्दिरसहित त्यहाँका संरचना बचेका छन् । अब मन्दिर आगलागीको जोखिमबाट मुक्त रहेको बताइएको छ ।